စစ်တပ်လော်ဘီ Han Nyein Oo ၏ Telegram ဖြုတ်ချခံရ…. – Alanzayar
စစ်တပ်လော်ဘီ Han Nyein Oo ၏ Telegram ဖြုတ်ချခံရ….
ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီးရာတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသော စစ်တပ်လော်ဘီ Han Nyein Oo ၏ Follower ၁ သိန်း ကျော်ရှိသော Telegram ကို ယနေ့ ည ၁၀ နာရီကျော်အချိန်တွင် ဖြုတ်ချလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Telegram ၏ ထုတ်ပြန်စာတွင် Han Nyein Oo Channel သည် Telegram ၏ လူမှုစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီ၍ ဖြုတ်ချကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။Han Nyein Oo သည် ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ခေတ်သစ်အယ်ဒီတာချုပ် သာလွန်ဇောင်းထက်နှင့်ပတ်သက်၍ မမှန်ကန်သော သတင်းများကို ဖြန့်ဝေခဲ့သေးပြီး အဆိုပါပို့စ်မှာ ၎င်း Channel ၏ နောက်ဆုံးပို့စ်လည်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် Han Nyein Oo ၏ Followers သုံးသောင်းခြောက်ထောင်ကျော် ရှိနေသော တယ်လီဂရမ်Channel တစ်ခုကျန်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဓာတ်ပုံ- Follower ၁ သိန်းကျော်ရှိသော Han Nyein Oo တယ်လီဂရမ်တွင် နောက်ဆုံးတင်သွားသော ခေတ်သစ်သတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာချုပ် သာလွန်ဇောင်းထက်နှင့်ပတ်သက်၍ မမှန်မကန်ဖြန့်ဝေထားသော ပို့စ်။
စဈတပျလျောဘီ Han Nyein Oo ၏ Telegram ဖွုတျခခြံရ….
ဒီမိုကရစေီအရေးလှုပျရှားသူမြားနှငျ့ စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး လှုပျရှားသူမြားကို ဖမျးဆီးရာတှငျ အဓိက အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျနသေော စဈတပျလျောဘီ Han Nyein Oo ၏ Follower ၁ သိနျး ကြျောရှိသော Telegram ကို ယနေ့ ည ၁၀ နာရီကြျောအခြိနျတှငျ ဖွုတျခလြိုကျကွောငျး သိရှိရသညျ။
Telegram ၏ ထုတျပွနျစာတှငျ Han Nyein Oo Channel သညျ Telegram ၏ လူမှုစံနှုနျးမြားနှငျ့မကိုကျညီ၍ ဖွုတျခကြွောငျး ဖျောပွထားသညျ။Han Nyein Oo သညျ ယနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ ခတျေသဈအယျဒီတာခြုပျ သာလှနျဇောငျးထကျနှငျ့ပတျသကျ၍ မမှနျကနျသော သတငျးမြားကို ဖွနျ့ဝခေဲ့သေးပွီး အဆိုပါပို့ဈမှာ ၎င်းငျး Channel ၏ နောကျဆုံးပို့ဈလညျးဖွဈသညျ။
လကျရှိတှငျ Han Nyein Oo ၏ Followers သုံးသောငျးခွောကျထောငျကြျော ရှိနသေော တယျလီဂရမျChannel တဈခုကနျြရှိနသေေးသညျကိုတှရေ့သညျ။ ဓာတျပုံ- Follower ၁ သိနျးကြျောရှိသော Han Nyein Oo တယျလီဂရမျတှငျ နောကျဆုံးတငျသှားသော ခတျေသဈသတငျးဌာန၏ အယျဒီတာခြုပျ သာလှနျဇောငျးထကျနှငျ့ပတျသကျ၍ မမှနျမကနျဖွနျ့ဝထေားသော ပို့ဈ။
Previous Article အမှန်တရား ခါးတော့ခါးမယ်
Next Article စစ်တပ်လော်ဘီ Han Nyein Oo ၏ Telegram ဖြုတ်ချခံရ….